वंगुर पालनका आधारभुत जानकारी - ज्ञानविज्ञान
वंगुर पालनका आधारभुत जानकारी
जस्तै धानको ढुटो ,कनीका, मकैको ढुटो, फिसमील भिटामिन, वोनमिल, पिनावडमिल, भान्साकारछयान, मोलासे सस्कीन्ड दुध, वटरमिल्क, क्षयकृत र केही हरियो घाँसापात जुन नत्र भने खेर जाने थिए । अझ गाउँ शहरका वाटामा थुपारिएका फोहरमैलावाट पनि आप्नो आहा र जोहो गर्न सक्छन् ।
यसैले यिनलाई स्वयंसेवा सफा र कर्मि भनिन्छ। स्थानीय काठे सुंगुर पाल्नु फाइदा जनकमान्नि । लार्ज ह्वाइट ,मोर्कशायर, मध्य सेतो योर्क शायर लैंडरस जस्ता उन्नत जातहरुका साथै धराने कालो वंगुर हाम्रो जस्तो भौगोलिक वनौट अनी हावा पानीका लागि पाल्न उपयुक्त मानिन्छन् ।
खोरेत रोगको उपचार रोकथाम के हुन्छ ?
५ दिन सम्म एण्टिवायोटिक सुई लगाउने । रोकथाम गर्न वर्षमा दूई पल्ट खोरेत विरुद्ध खोप (Vaccine) लगाउनु पर्छ ।
के बंगुरलाई खोरेत रोग पनि लाग्छ ? लक्षण के हुन्छ ?
भ्यागुते रोगको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ?
बंगुरलाई भ्यागुते रोग लाग्दा कस्तो लक्षण देखाउंछ ?
बंगुर विरामी भएमा कस्तो लक्षण देखाउंछ ?
होटलको बासी फालिएका खानेकुराहरु पनि दानाको रुपमा प्रयोग हुन सक्छ ?
बंगुरको आहारामा हरियो घांस पनि समावेश हुन सक्छ ?
एउटा बयस्क पोथी बंगुरलाई कम्तिमा कति सन्तुलित दाना आवश्यक पर्छ ?
बंगुरको लागि आवश्यक सुन्तलित दाना फार्ममा नै तयार गर्न सकिन्छ ?
कोरेली पोथी बंगुरलाई कुन उमेरबाट प्रजनन योग्य मानिन्छ ?
प्रजननको लागि छानिने पोथी बंगुरमा कस्तो गुण हुनु पर्छ ?
प्रजननको लागि भाले बंगुर कस्तो हुनु पर्छ ?
पाख्रिवास कालो बंगुर स्थानीय च्वाचे हुर्रा भन्दा के मा राम्रो छ ?
धराने कालो बंगुर भनेको कुन जातिको बंगुर हो ?
बंगुरमा कृत्रिम गर्भाधान गर्दा व्याड खोजेको कुन समयमा गराउने ?
के बंगुरमा कृत्रिम गर्भाधान गरिन्छ ?
वीर व्याड खोजेको माउलाई वीर लगाउने उत्तम समय कुन हो ?
बंगुरको माउ/भुनी, कोरेली पोथीले वीर व्याड खोजेको वा ऋतुकालमा आएको बेलाको लक्षण कस्तो हुन्छ ?
बंगुरको माउलाई थुनेलो रोग (Mastitis) पनि लाग्छ ?
बंगुरलाई पिउने पानी कस्तो समयमा कति आवश्यक हुन्छ ?
दिनमा कति पल्ट दाना दिनु राम्रो हुन्छ ?
व्याएको माउ बंगुरलाई आहारा दाना के हिसाबले दिनु पर्छ ?
पाठा/पाठीलाई माउबाट कती हप्ता भएपछि छुट्टै राख्दा हुन्छ ?
पाठा/पाठीलाई माउको दूध साथै दाना पदार्थ कहिलेबाट दिनु पर्छ ?
कुन उमेरको भाले पाठोलाई खसी पार्न राम्रो हुन्छ ?
के बंगुरको पाठा/पाठीको पुच्छर पनि काट्नु पर्छ ?
पाठा/पाठीमा पुच्छर टोक्ने खराब बानी नहोस भनि काट्न सकिन्छ । जन्मेको दिनमा आधा जति टुप्पो तर्फ सफा कैची वा ब्लेडले काटेर टिन्चर आयोडिनमा डुबाउनु राम्रो हुन्छ । ठूला व्यवसायिक फार्ममा यो विधि अपनाईन्छ ।
बंगुरको पाठा/पाठीहरुलाई पहिचानको लागि नम्बर कसरी लगाउन सकिन्छ ?
इएर नोचिङ्ग (Ear Notching): कान काटेर
ट्याटोइङ्ग (Tattooing): छालामा नम्बर खोपेर
ट्यांगिङ्ग (Tagging): कानमा नम्बर झुण्ड्याएर
पाठा / पाठीलाई रक्त अल्पताको रोगबाट कसरी बचाउने ?
बंगुरको पाठा / पाठीको दांत काट्नु पर्छ भनिन्छ के हो ?
बंगुरको पाठा/पाठीको नाईटो काट्ने भनेको के हो ?
साना पाठा / पाठीलाई विगौती दूध कति दिने ?
पाठा/पाठीलाई विगौती दूध आएसम्म दिनु पर्छ । पछाडी जन्मेका साना पाठा/पाठी (Runt) लाई हेरचाह गर्ने मानिसले खाए सम्म विगौती दूध खुवाउन मद्दत गर्नु पर्छ ।
ब्याउने बंगुरको माउलाई कसरी व्यवस्थपन गर्ने ?
बंगुरपालनमा फोस्टरिङ्ग (Fostering) भनेको के हो ?
बंगुरपालनमा जैविक सुरक्षको व्यवस्था कसरी गर्ने ?
कस्तो प्रकारको तालीमहरु पाईन्छ बंगुरपालन सम्बन्धमा ?
बंगुरपालन कार्यको लागि तालीम एवं अन्य सहयोग लिन कहां सम्पर्क गर्ने ?
व्याउने वेला भएको माउको हेर विचार कसरी गर्ने ?
वंगुरको गोठ/ खोरको दुर्गन्ध नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
वंगुर पालन गर्ने खोरमा दाना खुवाउने/दिने भाडा वा ठाउँ कस्तो हुनु पर्छ ?
वंगुरको लागि नमुना गोठ निर्माण गर्न के गर्नु पर्ला ?
व्याउने माउ र वच्चासंगै राख्नु हुन्छ ?
वंगुरको खोर/गोठ निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने विषयहरु के के हुन ?
वंगुरको मलमुत्रबाट गोवर ग्याँस निकाल्न सकिन्छ ?
वंगुर पालनमा लागेका किसानले सरकारी सहयोग कसरी पाउछ ?
युवा कृषक, कृषक समूह, कृषक समितिहरुलाई जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत प्राविधिक ज्ञान गोठ, आहार व्यवस्थापन एवं आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुन्छ । व्यावसायिक कृषकहरुले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा समय समयमा सम्पर्क राख्नु पर्छ ।
वंगुरको गर्भ अवधि कति दिनको हुन्छ ?
मासुको लागि पालिने वंगुर पनि त्यस्तै छिटो वढ्छ त ?
एक वर्षमा एउटा माउ वंगुरले कति पल्ट व्याउछ ?
एउटा माउ वंगुरले कति वटा सम्म पाठा / पाठी पाउछ ?
अहारालाई मासुमा परिवर्तन गर्ने क्षमता अन्य पशु भन्दा वंगुरमा राम्रो हुन्छ भन्छन के हो ?
नेपालमा फस्टाएका वंगुरको उन्नत जातहरु के के हुन ?
किसानले मन पराएका वंगुरको राम्रो जातहरु निम्न छन्
पाख्रीवास कालो एवं स्थानीयमा
नोट : हामीले यो लेख कृषिपत्रिका डटकम बाट लिएका हौँ । कृषिपत्रिका डटकममा तपाईले कृषिबारे थप जानकारीहरु पढ्न सक्नुहुनेछ । यो लेख कृषिपत्रिका डटकममा पढ्नका लागि यो लिंकमा जानुहोस् । http://krishipatrika.com/
Don't Miss it गोलभेडा खेती गर्न के प्रबिधि अपनाउनुपर्छ !
Up Next भिटामिनले भरिपुर्ण तरकारी कर्कलो ! यसका अचुक फाइदाहरु यस्ता छन्
अब अर्ग्यानिक तरकारी घरमा सजिलै उब्जाउन सकिन्छ
सागतरकारी धेरै उत्पादन गर्ने वा छिटो पकाउने चक्करमा किसानले अत्याधिक किटासक औषधी लगायत विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यही…
औषधिय गुड मेवाको ब्यबसायिक खेती प्रबिधि जानिराखाैँ
मेवा तराई तथा मध्य पहाडमा उत्पादन गर्न सकिने एक महत्वपूर्ण फल हो । क्यारिकेसी (caricaceae) समूहमा पर्ने यो फल पौष्टिक…
लिच्ची फल फुट्ने समस्या किन र नियन्त्रण को उपाय के ?
अहिले लिच्ची को सिजन हो । प्राय तराईमा फल्ने यो फल लाई फल को रानी पनि भनिन्छ । नेपाल को…
जिरा खेती प्रविधि बारे सम्पुर्ण जानकारी
जिरा एक मसला वाली हो । यस्को उत्पत्ति मिश्र ( इजिष्ट) मा भएको मानिन्छ । उत्पादन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरुमा भारत,इरान,…
बोझो खादा हुने फाइदा र खाने तरिका
गाउँघरतिर घाँटी दुख्दा बोझो चपाउन दिइने गरेको पाइन्छ । बोझो मुखमा हालेपछि यसको टर्रो र तिख्खर स्वादको रस आउँछ ।…
शिवको प्रसाद भाङ कति फाइदाजनक ?
भाङ खाँदा फाइदा हुन्छ कि बेफाइदा ? सामान्य हिसाबले कुरा गर्दा भाङ खाएपछि कतिले रमाइलो भएको बताउँछन् भने कतिलाई यसले असर…
दालचिनीलाई महसँग मिसाएर खाँदा यी रोगसंग लड्न सहायता पुग्छ
क्यान्सर दिनदिनै तातोपानीका साथ दालचिनीको धूलो र मह खाँदा शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ्छ । यसले शरीरलाई क्यान्सर सेल्ससँग लड्न सहायता…